Plage Ramena : Nifandrombahana ny nanao « selfie » tamin’ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaPlage Ramena : Nifandrombahana ny nanao « selfie » tamin’ny Filoha
Nifarana omaly tany Antsiranana, tao amin’ny kianja filalaovam-baolina tamin’ny alalan’ny fotoam-bavaka lehibe ny fanokafana ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM sy ny faha-200 taonan’ny nahatongavan’ireo misioneran’ny LMS na ny London Missionary Society teto amintsika rehefa nizotra nandritra ny telo andro. Nasain’ny komity mpikarakara nanatrika izany tany an-toerana ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina niaraka tamin’ireo mpikambana teo anivon’ny governemanta. Tonga nanatrika izany ihany koa ireo mpino marobe manerana ny Nosy.
Nanambara kosa ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny fandraisam-pitenenany nandritra ilay fotoam-bavaka fa mila aseho amin’ny fihetsika sy ny asa ny finoana. “Asehoy amin’ny alalan’ny fihetsika sy ny asa ny finoana. Zavatra tsy afa-misaraka ihany koa ireo amin’ny fampandrosoana ny firenena”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, maro ny hafatra natsipin’ny Filohan’ny Repoblika ho an’ireo mpino marobe tonga nanome voninahitra sy nanatrika ny hetsika. Ankoatra izay, nankahery ny fiangonana FJKM ihany koa ny tenany amin’ny asa sy ny adidy tanterahiny amin’ny fivavahana manerana an’i Madagasikara.
Marihina fa anisan’ny nanampy tamin’ny famerenana amin’ny laoniny sy fampandehanana ny onjampeon’ny fiangonana FJKM, ny Radio Fahazavana, ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Tsiahivina mantsy fa nikatona tamin’ireny “Raharaha 2009” ireny ity onjam-peo iray ity.
Ankoatra izay, mamy hoditra amin’ireo mpino marobe ny Filoha Hery Rajaonarimampianina satria noraisin’izy ireo tamin’ny fomba nanetriketrika. Tsy vitan’izay fa tamin’ny fitsidihana ny moron-dranomasin’i Ramena niarahany tamin’ireo mpino marobe tonga tany an-toerana, nifandrombaka nanao “selfie” niaraka tamin’ny Filohan’ny Repoblika izy ireo. Tamin’izany indrindra no nilazan’ireo mpino fa mbola tsy nisy Filoham-pirenena tsotra toa an’i Hery Rajaonarimampianina izay afaka naka sary niaraka tamin’izy ireo. Manampy izany koa ny fiarahan’ny Filoham-pirenena nilomano tamin’ireo mpino marobe ireo.
Etsy andaniny, saika nahitana solontena nanatrika ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny FJKM avokoa ireo fiangonana hafa, toa ny avy eo anivon’ny fiangonana Katôlika, ny teo anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy na ny FLM.
Ny filohan’ny fiangonana FJKM, ny Pasitera Irako Andriamahazosoa kosa no nitarika ny fotoam-pivavahana lehibe, omaly. Izy ihany koa no nitory teny tamin’ireo mpino marobe tonga nanotrona ny fotoana. Voalaza ary nivoitra tamin’ny toriteny koa ny fifamelana sy ny fifankatiavana ary ny fiovana toetra sy fitondran-tena ho an’ireo mpino, sns.
Etsy andaniny, nisy ny fiaraha-misakafo ara-pirahalahiana niarahan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ireo mpikambana maro teo anivon’ny komity mpikarakara ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny fiangonana FJKM.
Feno dia feno ny fandaharam-potoan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tany Antsiranana nandritra ny telo andro satria nisy ihany koa ny fitsidihany tamin’ny fomba ôfisialy ny Ivon-toeram-piofanana matihanina mikasika ny fambolena.
Nifanotofana avokoa ireo karazana tsena rehetra teto an-drenivohitra nandritra ny fanomanana ny fetin’ny Noely. Tsy nisy tsena tsy nahitana filaharana araka izany, na ny tsenan’ny akanjo io, na irony kojakoja fetina mianjaika mandritra ny andro ...Tohiny